कपिलवस्तुमा नेपाली कांग्रेस वलियो छः नेता सेन
NST: शुक्रवार, ०९:२२ | ५ माघ, २०७४ | 19th January 2018
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा अहिले चुनावी माहोल निकै तातेको छ । राजनीतिक दलहरुले चुनाव प्रचार प्रसारलाई तिव्रता दिएका छन् । विगतमा पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कपिलवस्तुमा अहिले ३ वटा मात्रै रहेका छन् ।
जसमा नेपाली कांग्रेसबाट क्षेत्र नम्बर १ मा दीपकुमार उपाध्याय, २ मा सुरेन्द्र आचार्य र ३ मा अभिषेक प्रताप साह प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । गत कार्तिक १६ गते मनोनयनको दिनमा केही असहज देखिएपनि अहिले कपिलवस्तुमा नेपाली कांग्रेस वलियो बन्दै पनि गएको छ । यसका साथै पार्टीमा विद्रोह गरेर कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएका दुर्गा बहादुर सेनले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार उपाध्यायलाई सघाउने घोषणा गर्दै अहिले चुनावी प्रचार प्रसारमा खटिएका छन् ।
निर्वाचन प्रचार प्रसारमा खटिएका दुर्गाबहादुर सेनलाई कपिलवस्तुको चुनावी माहोलबारे कुरा गरेका छौँ । सेनसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
कपिलवस्तुको चुनावी अवस्था के छ ?
पहिला सिमांकनको समस्या थियो, अहिले कपिलवस्तुका ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई उत्तर– दक्षिणमा गरि विभाजन गरिएकाले मतदाता र सवैका हिसाबले नेपाली कांग्रेस मजवुत अवस्थामा छ ।
नेपाली कांग्रेस मजवुत देखिएको आधार के त ?
अहिलेको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट गठबन्धनको नाममा २ वटा गठबन्धन बनेका छन् । यसरी दुईवटा गठबन्धन बनेर निर्वाचन लड्दा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बलियो देखिएको छ । अहिले सम्म नेपाली कांग्रेसले कपिलवस्तुमा अरु कुनैपनि पार्टिसँग गठबन्धन गरेको छैन । तर अन्य पार्टीहरुलाई मिलाउने तयारी अहिले पनि जारी छ । यो निर्वाचनको अघिल्लो दिन सम्म पनि जारी रहन्छ ।
कपिलवस्तु १ मा दीपकुमार उपाध्याय किन ?
यो केन्द्रले चाहेको कुरा हो । केन्द्रको निर्णय अनुसार उहाँले कपिलवस्तु १ बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनकालागि उम्मेदवारी दिनुभयो । केन्द्रले गरेको निर्णयको विपक्षमा केही दिन केन्द्रको नेतृत्वलाई झक झक्याउन केही निर्णय लियौँ । तर केन्द्रले सहि निर्णय गरेकाले म पछाडि हटेर पुर्णरुपमा दीपकुमार उपाध्यायलाई सहयोग गरेको छु । म अहिले चुनावी प्रचार प्रसारमा खटिएको पनि छु ।
अब को नेतृत्वले विकासका के काम गर्नुपर्छ ?
अहिले दीपकुमार जी आउनु भएको छ । उहाँले विगतमा पनि गर्नुभएको थियो र आगामी दिनहरुमा पनि उहाँले अझै विकासका कामहरु गर्नुहुने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कपिलवस्तुमा नेपाली कांग्रेसको वर्चश्व जमाउन सुरेन्द्र आचार्यको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । उहाँ कांग्रेसको पार्टी सभापति पनि हो र अहिले २ नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव लड्नु भएको छ । ३ नम्बर क्षेत्रमा अभिषेक प्रताप साह हुनुहुन्छ । उहाँ पनि साह परिवारको राम्रो क्याडर हो ।
प्रस्तुतिः मुक्तिबाबु रेग्मी
मर्यादित प्रतिष्पर्धाका लागि मेराे उम्मेद्वारीः दीपकुमार उपाध्याय
सक्रिय राजनीतिमा फर्कन्छुः राजदूत उपाध्याय
राजनीतिक दलको पितृसत्तात्मक सोचकै कारण निर्णायक तहमा महिला पुग्न सक्दैनन्ः सांसद चाैधरी
संघियता सफल भएको दिन सार्वजनिकरुपमै क्षमायाचना गर्न तयार छुः संविधानविद् आचार्य